သမ်လွမ်း လိုဏ်ဂူအတွင်းပိတ်မိမှု ကယ်ဆယ်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Screen capture of an NBT news report on the rescue, showing personnel and equipment at the entrance of the cave.
၂၃ ဇွန် ၂၀၁၈ (၂၀၁၈-၀၆-၂၃) – present
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဂူထဲ၌ ရေလွှမ်း
၉ရက်အကြာတွင် အားလုံးအသက်ရှင်​နေ​ကြောင်း​တွေ့ရှိခဲ့ Rescue operation currently underway.
၂၀၁၈ခုနှစ် ​ဇွန်လ၂၃ရက်​နေ့တွင် အသက်၁၁နှစ်မှ၁၆နှစ်အထိရှိ​သော ​​ဒေသ​ဘောလုံးအသင်းမှ က​လေး၁၂​ယောက်နှင့် နည်းပြတစ်​ယောက်တို့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းရိုင်ခရိုင်ရှိ သမ်လူအမ်လိုဏ်ဂူတွင် ပိတ်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။သူတို့ဂူအတွင်းဝင်သွားပြီးအပြင်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာပြီး ဂူအတွင်း​ရေများဝင်​ရောက်ကာ ပိတ်မိ​နေခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့​ပျောက်ဆုံးပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ​ပျောက်ဆုံး​ကြောင်းတိုင်ကြားခံရပြီး ရှာ​ဖွေ​ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်​ဆောင်ခဲ့သည်။ဂူထဲတွင်သူတို့ရှိ​ကြောင်း အတည်ပြုအပြီးဂူအတွင်းသို့ဝင်​ရောက်ရန် ကြိုးစားကြ​သော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှု​ကြောင့်အခက်အခဲများရှိခဲ့သည်။နိုင်ငံ​တော်အစိုးရကိုယ်တိုင် ရှာ​ဖွေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံမ​ျား၏စိတ်ဝင်စားမှုခံခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများနှင့်ရှာ​ဖွေခဲ့ပြီး ​ပျောက်ဆုံးပြီး၉ရက်အကြာတွင် ​ရေငုပ်သမားကယ်ဆယ်သူများက ဂူ၏ အတွင်းပိုင်း​တော်​တော်ကျ​သော​နေရာတွင် ​တွေ့ရှိခဲ့သည်။​ရေမျာ္ပြည့်​နေ​သော​နေရာရှိ ​ကျောက်တုံးအမြင့်​ပေါ်တွင် အားလုံးကိုအသက်ရှင်လျက်​တွေ့ခဲ့သည်။ဂူအတွင်းမှထွက်ရန်မှာမူ ​ရေငုပ်သင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ​ရေကျသွားရန်​စောင့်ခြင်းတို့လိုအပ်သည်။
ကယ်ဆယ်ခြင်းတွင် လူ​ပေါင်း၁၀၀၀​ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိုင်း​ရေတပ်မှ နိုင်ငံ​တော်အဆင့်ကယ်တင်ခဲ့သည်။မြန်မာအပါအဝင် ဗြိတိန်၊တရုတ်၊လာအို၊ဩစ​​တြေးလျနှင့် အ​မေရိကန်တို့ပါ ကူညီခဲ့သည်။
၂.၁ ကနဦး ရှာ​ဖွေမှု
သမ်လုအမ်ဂူမှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒွိုင်နမ်နွန်​တောင်တန်းတွင်တည်ရှိပြီး ၁၀ကီလိုမီတာ(၆.၂မိုင်)ရှည်လျားသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လ၂၃ရက်တွင် အသက်၁၁နှစ်မှ၁၆နှစ်အထိရှိ​သော ​​"Moo Pa" ​ဘောလုံးအသင်းမှ က​လေး၁၂​ယောက်နှင့် ၂၅နှစ်အရွယ်နည်းပြတစ်​ယောက်တို့မှာ လိုဏ်ဂူအတွင်း​ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။
သိသိချင်း စစ်တပ်မှ ရာ​ဖွေခဲ့သည်။မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း​နေ၍ ကယ်ဆယ်​ရေးမှာ ​အခက်အခဲများရှိခဲ့သည်။၄ရက်အကြာတွင် ဗြိတိန်နှင့် အ​မေရိကန်တို့မှကယ်ဆယ်​ရေးသမားများ​ရောက်လာသည်။
ဇူလိုင်လ၂ရက်​နေ့ ည၁၀နာရီတွင် အားလုံးကိုအသက်ရှင်လျက်ရှိ​ကြောင်းသိခဲ့ရသည်။သူတို့ကို ဗြိတိန်​ရေငုပ်သမား၂ဦးက​တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး​တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဗွီဒီယိုကို ထိုင်း​ရေတပ်မှ လူမှုကွန်ယက်တွင်တင်ခဲ့သည်။ထိုဗွီဒီယိုတွင် က​လေးများမှ သူတို့ဘယ်​လောက်ကြာ​အောင်ပိတ်မိခဲ့​သနည်းနှင့် ​နေ့စွဲတို့ကို​မေးမြန်း​နေကြသည်။
ဇူလိုင်လ၃ရက်​နေ့တွင် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုအပါအဝင် ​ရေငုပ်သမား၇​ယောက်မှာ ဂူအတ့င်းဝင်ခဲ့သည်။
↑ Live : เจอแล้ว! 13 ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงเชียงราย #ถ้ำหลวงล่าสุด #ทีมหมูป่า #ข่าว13ชีวิต, 2018-07-02, archived from the original on5July 2018, retrieved 2018-07-05 Unknown parameter |df= ignored (help)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သမ်လွမ်း_လိုဏ်ဂူအတွင်းပိတ်မိမှု_ကယ်ဆယ်ခြင်း&oldid=414738" မှ ရယူရန်
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၀၃:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။